“Waxaan wali ku leeyahay kooxda Inter saaxiibo iyo xusuus aad u fiican” – Philippe Coutinho – Gool FM
“Waxaan wali ku leeyahay kooxda Inter saaxiibo iyo xusuus aad u fiican” – Philippe Coutinho
(Yurub) 28 Maarso 2019. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil iyo kooxda Barcelona Philippe Coutinho ayaa fariin u diray kooxdiisa hore ee Inter Milan.
Philippe Coutinho ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah “SportMediaset” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu ku muujiyay sida uu wali u jecel yahay kooxdiisii hore ee Intar Milan.
“Weli waxaan ku leeyahay kooxda Inter Milan saaxiibo badan iyo xusuuso badan ee aad u wanaagsan”.
Sidoo kale wargeyska “Calcio Mercato” ee dalka Talyaaniga ayaa tilmaamay in hadalkan kasoo yeeray Philippe Coutinho ay sare u qaadi doonto xiisaha taageerayaasha Nerazzurri, kuwaasoo doonaya in markale uu kooxda ku soo laabto xidiga reer Brazil.
Waxaa xusid mudan in Inter Milan ay sabab buuxda u ahayd in Philippe Coutinho uu soo caga dhigto kubadda cagta ee qaarada yurub, kadib markii ay sanadii 2008-dii kala soo saxiixdeen kooxda Vasco da Gama ee dalka Brazil, wuxuuna ugu dambeyntii kaga biiray 2013 kooxda Liverpool.
Coutinho ayaa ciyaaray kaliya 28 kulan ee ah horyaalka Serie A, isagoo dhaliyay seddex gool intii uu joogay kooxda Inter Milan.